BAOLINA KITRA – CAN 2019 : Nentin’i Njiva tamin’ny alalan’ny isa tokana ho any Cameroun ny Barea
Nandritra ireo ora namezivezena ireo mpikatroka Malagasy tany amin’ny seranampiaramanidin’i Malabo ny alahady ny tapany marain’ny alatsinainy teo dia nanararaotra nanaza-tena am-pitoniana hatrany ny Nzalang Nacional. 24 septembre 2018
Satria nihevitra izy ireo fa ady an-kafetsena tahaka izany no handavoany ny Barea teto an-tanintsika omaly. Tsy nahomby nefa ny tetika satria telo minitra tsy hakana aina omaly, hahataperan’ny fizaram-potoana voalohany dia nopotehin’i Njiva tanteraka izany nofinofin’ny gineanina hiatrika Can izany.
Baolina nentiny izy irery nanavatsava avy any aoriana no tsy namelany raha tsy nanakobana ny haraton’i Felipe mpiandry harato ekatô-gineanina. Io isa tokana noho aorta io no nisarahana teo am-pialantsasatra ary mbola io ihany koa no nisarahana tany amin’ny 90 minitra ara-dalàna niampy efatra minitra noho ny fanonerana ny fotoana very.
Azo lazaina fa mora kokoa noho ny lalao mandroso no niatrehan’ny Barea ny lalao omaly teny Vontovorona na dia somary tratra aoriana aza ilay baoilim- pandresena raha oharina tamin’ny sabotsy. Ambony dia ambony ny toe-tsaina nentin’ireo mpilalao fa indrindra ny an’ingahy Nicolas Dupuis mpanazatra satria natoky tanteraka ireo mpilalao 11 lahy nampidiriny voalohany izy. Tany amin’ny minitra faha-88, ohatra voa nampidiriny i Carolus. Ity farany izay mpamono baolina ihany koa. Midika izany fa tsy nisy nampanahy an’ingahy mpanazatra mihitsy ireo mpilalao nalahany voalohany.
Nisy ihany ireo baolina tokony ho fatin’ny Malagasy ankoatra an’iny saingy iny aloha no nambinina ka iny no tafiditra.
Tany amin’ny minitra faha-30, ohatra dia efa nahita daka tsara tarehy i Njiva saingy nifanandrify tamin’i Felipe mpiandry harato izany. Teo amin’ny minitra faha-37 mbola nisy ihany koa baolina tokony ho tafiditr’i Faneva Ima tamin’ny lohany saingy nihilana kely ka lasa tany amin’ny harato andrirany. Baolina avy any amin’i Voavy Paulin izay saika nampidirin’i Faneva Ima izay. Daka an-kavia kosa no nampidiran’i Njiva an’ilay baolim-pandresena teoa min’ny minitra faha-42 ka nilazany indray omaly fa mbola hanao tsaratsara kokoa izy sy ny mpiara-milalao aminy amin’ny manaraka. Nankasitrahany ireo mpiara-milalao aminy fa indrindra ireo mpijery izay nanohana azy ireo hatramin’ny farany.
Tamin’iny andro fahefatra omaly iny, ny Malagasy no ekipa voalohany tafakatra ho any amin’ny dingana faran’ny Can Total Cameroun 2019. Mbola adin’ny telo taty aoriana vao nanomboka ny lalaon’i Sénégal sy Soudan. Ekipa telo tamin’ny Malagasy ihany koa no nahita fandresena tany an-tanin’olona nandritra ny andro fahatelo. Koa tonga amin’ny fotoanany tokoa izao fandresena izao satria hatrizay nitsanganan’ny federasion’ny kitra Malagasy, sambany no handray anjara amin’ny dingana tahaka izao ny ekipam pirenentsika.
Ny tsara homarihina kosa dia indroa ihany no nisy mpanazatra ny ekipam-pirenena teo amin’ny kitra Malagasy ka ny Fanjakana no nanakarama azy. Voalohany ilay teratany alemanina Snit Gher ary faharoa i Paul Rabier fony Rajoelina Andry Nirina no filohan’ny Tetezamita. Ankehitriny, mody ventiny ny rano nantsakaina mba handray anjara amin’ny fanakaramana mpanazatra amin’izay ve ny Fanjakana ?
Mbola manana lalao roa isika aorian’izao ka dia ny lalao miverina amin’i Sénégal sy ny lalao miverina amin’i Soudan. Nahafaty baolina 7 ny Barea hatreto ary nidiram-baolina telo.
Ireto izy 11 lahy nampidirin’i Nicolas Dupuis voalohany omaly : Dabo Ibrahim, Faneva Ima(kapiteny), Metanire Romain, Razakanantenaina Pascal, Rako tondrazaka Andrianavalona Andoniaina, Mombris Jerome, Ilaimaharitra Marco, Amada Ibrahim, Nomenjanahary Lalaina Henintsoa, Voavy Paulin, Rakotoharimalala Njiva Tsilavina. Andriamahitsinoro Carolus niditra teo amin’ny minitra faha-88.